Pro စက်ဘီးအသင်းတခု ထောင်ဖုို့ သိပ်ခက်သလား...။ ~ Htet Aung Kyaw
Pro စက်ဘီးအသင်းတခု ထောင်ဖုို့ သိပ်ခက်သလား...။
4:27 AM Htet Aung Kyaw No comments
တနှစ်ကုို ယူရွန် ၅ သန်းလောက်ရနေတဲ့ နာမည်ကြီးစက်ဘီးသမားတွေ၊ စက်ဘီးအသင်းတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေကို စက်ဘီးဝါသနာရှင်အတော်များများ အလွတ်ရနေပေမဲ့ UCI အသိအမှတ်ပြု Pro စက်ဘီးအသင်းတခုဖြစ်အောင် ဘယ်လုို အဆင့်ဆင့်ကြိုးစားရတယ်ဆုိုတာကိုတော့ သိသူအတော်နည်းမယ် ထင်ပါတယ်။ (စာရေးသူကုိုယ်တုိုင်လဲ အခုမှ လေ့လာဆဲ)
၂၀၁၆ အတွက် UCI အသိအမှတ်ပြု စက်ဘီးအသင်း ၁၈ သင်းပဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက နာမည်ကြီးအသင်းတခုဖြစ်တဲ့ (လက်ရှိ ကမ္ဘာ့ချန်ပီ ယံ ပီတာ ဆာဂန်ဝင်စီးနေတဲ့) Tinkoff team အသင်းကို ရှေ့နှစ်ကျရင် ဖျက် တော့မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ရောင်းထုတ်တော့မယ်ဆုိုပြီးလည်း သတင်းတွေထွက် နေပါတယ်။
ဒီနေလုိုသတင်းမျိုးစုံထွက်နေစဉ် ဒီနေ့ ဒိန်းမတ်နုိုင်ငံ ကုိုပင်ဟေဂင်မှာကျင်းပ တဲ့ သတင်းစာရှင်းပွဲတခုမှာတော့ စက်ဘီးအသင်းအသစ်တခုကို လာမဲ့ ၂၀၁၇ မှာ ထူထောင်မယ်လို့ တချိန်က Tinkoff team ရဲ့မန်နေဂျာလုပ်ဖူးသူ Bjarne Riis ကကြေညာလုိုက်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူ Lars Seier Christensen လဲ ပါ ၀င်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ် အိုမန်မှာကျင်းပတဲ့ Tour of Oman ပွဲအတွင်း ထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဘာရိန်မင်းသားကြီးက စက်ဘီးအသင်းတခု ထောင်မယ်လုို့ ပြောတဲ့အသင်းနဲ့ တခုတည်းလား။ သီးခြားစီလား ဆုိုတာကိုတော့ Riis က ငြင်းဆုိုခြင်း၊ အတည်ပြုခြင်း မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ် ၂ ဦးစလုံးဟာ မနှစ်ကအထိ Tinkoff team အသင်းကို စပွန်ဆာပေးခဲ့တဲ့ Saxo Bank ရဲ့ အဆင့်မြင့်အရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။ Riis/Seier လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ သူတုို့ ၂ ဦးပုိုင် စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းတခုကို ထူထောင်ထားပြီး စက်ဘီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ့မှုတွေ ဆောင်ရွက်နေပြီ လုို့ပြောပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ စံချိန်မီအသင်းတခုဖြစ်လာရေးအတွက် ဆက်စပ်သူအားလုံး နဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာ စတင်ဝင်ပြိုင်နုိုင်ပါလိမ့်မယ်၊ အခြေခံခုိုင်ဖုို့ကအရေးကြီးပါတယ် ဆုိုပြိး Bjarne Riis ပြောဆုိုခဲ့ပါတယ်။
UCI အသိအမှတ်ပြု ၁၈ သင်းကတော့...
The 18 confirmed WorldTour teams for 2016
1-Ag2r La Mondiale
2-Astana Pro Team
3-BMC Racing Team
4-Cannondale Pro Cycling Team
15-Team Lotto NL-Jumbo
18-Trek Factory Racing တုို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီမီး ပရုိုကတော့ ၁၉ သင်းရှိပါတယ်။
The 19 confirmed Professional Continental teams for 2016
3-Caja Rural-Seguros RGA
4-Cofidis, Solutions Credits
5-Cult Energy-Stölting Group
6-Delko Marseille Provence KTM
7-Drapac Professional Cycling
9-Funvic Soul Cycles-Carrefour
11-ONE Pro Cycling
12-Roompot Oranje Peloton
15-Team Novo Nordisk
17-UnitedHealthcare Professional Cycling Team
18-Verva Activejet Pro Cycling Team
19-Wanty-Groupe Gobert ။ ။
Spring Classics နဲ့ မတ်လအတွက် တာဝေးပွဲစဉ်များ...။
ဥရောပရဲ့ ပွဲဦးထွက် Spring Classics မှာ Van Avermae...
အီသီယုိုပီးယားသူက ဥရောပမှာ Pro Cyclist ဖြစ်ချင်လု...
ဘလဂျီယံ Spring Classics အတွက် Tinkoff အသင်းကို Sag...
ပြိုင်ဘီးထဲမှာ မော်တာတွေ လျှုို့ဝှက် ထည့်ထားနုိုင်...
Ruta del Sol ပွဲ Alejandro Valverde ဗုိုလ်စွဲ.
Volta ao Algarve စာစုများ။
Tour of Oman စာစုများ။
Disc နဲ့ ရိုးရိုးဘီး ဘယ်ဟာက ပုိုကောင်းသလဲ...။
အသက် ၄၄ နှစ်အရွယ် Pro စက်ဘီးသမား Christopher Horner.
Tour of Qatar စာစုများ။
Dubai Tour စာစုများ။
Challenge Mallorca race ပထမနေ့ Greipel အနုိုင်ရ
Giant-Alpecin team အသင်း ကားတုိုက်ခံရခြင်း။
Tour de san Luis စာစုများ။
Tour Down Under စာစုများ။
ရေခဲရဲတုိုက်နှင့် အာတိတ်စက်ဝုိုင်းဆီ ခရီးသွားခြင်း...
ဗမာနဲ့ မြန်မာ (မောင်သာနုိုး)
ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲများကုို ကျော်၍ကြည့်ခြင်း